Porto Riko: Sary 365 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2012 3:46 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, Español, Français, عربي, русский, Svenska, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Dansk, македонски, Shqip, Português, Filipino, English
Manapika sary iray isan'andro tao anatin'ny roa taona ny mpaka sary José Rodrigo Madera [es], ary anatin'ny tetikasany antsoina hoe “365” izany. Ny namany ao amin'ny Facebook ihany no nahita ny sariny mandra-pamoakan'ny gazety-boky Revista Cruce [es] sary 20 amin'izy ireny ho ankafizin'ny rehetra.
Milaza ny tenany ho toy izao i José Rodrigo Madera:
…mpaka sary matihanina tsy nianatra zavakanto mihitsy. Nianatra Serasera tao amin'ny Universidad Interamericana, ary naniry hampianatra haka sary. Matoky ny mariazy ary mihevitra ny tenany ho kavia [ara-politika?]. Manokana ny asany rehetra ho an'ny lehilahin'ny fiainany, Emil Alejandro, sy ny vehivavy izay fitiavan'ny fiainany, Penelope.
Indreto ny santionany voafantina amin'ny sariny mahafinaritra.*
Pitcher: 1. Olona izay tsy voatery hanatontosa adidy na andraikitra atolotry ny tenany ihany noho ny antony samihafa. 2. Olona tsy mamaly antso.
Ankizy mikilaoty mena.
Miomana alaina sary i Agostini.
Ny renin i "azul."
*Ny sary rehetra dia nahazoana alalana avy tamin'ny mpaka sary sy ny Revista Cruce. Ny pika dia nadika avy tamin'ny lahatsoratra niaviany (ankoatra izay tamin'ny teny anglisy).